Sida loo beddelo sawirka astaanta xiriirka ee WhatsApp | Androidsis
Sida loo beddelo sawirka astaanta xiriirka ee WhatsApp
Codsiyada waqti ka dib waxay ku darsanayeen ikhtiyaarro loo qaabeynayo, isla sidaas ayaa ku dhacday WhatsApp, mid ka mid ah kuwa ugu caansan waqtiga wadahadalka. Waqtiga Kirismaska ​​waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu cadcad in la diro farriin Kirismas ah, loo hambalyeeyo Sannadkii Hore iyo dabcan, soo gelitaanka cusub ee sanadka.
Hawl aad u faa'iido badan ee WhatsApp waa in la awoodo in la beddelo sawirka astaanta ee saaxiib kastaTani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku aqoonsato liiska xiriirkaaga, kaasoo, haddii uu ballaaran yahay, uu noqon doono mid aad u dhib badan. Waad ku sameyn kartaa xiriir kasta oo aad rabto, laakiin haddii qofkaasi beddelo, kii xilligaas la sameeyay ayaa lumaya.
Uma baahnid inaad rakibo wax codsi ah oo dibadda ah, way kugu filnaan doontaa inaad adeegsato abka rasmiga ah oo qaado talaabooyin yar si aad u doorato sawirkaas wakiilka ah. Markaad yeelato mid ka mid ah qofkaas, wax walba way ka fiicnaan doonaan, maaddaama aan mid dhigi karno oo aan toos ugu tagno saaxiibkaa ama xigtada
Waxaa jira dad badan oo aan isticmaalin sawir ama aan lahayn asturnaan asturnaan oo sarreysa oo aan ku muujin karin sawirkooda WhatsApp. Hadday taasi dhacdo, waxaa ugu wanaagsan in la dejiyo hab-dejin ah Isaguna ha la joogo iyada, waa kiiska nagu dhacay iyada oo laba ka mid ah xiriiradayagu ku jiro arjiga.
Si aad u bedesho sawirka saaxiib ee WhatsApp waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Fur barnaamijka WhatsApp qalabkaaga Android
Raadi xiriir gaar ah oo aad rabto inaad beddesho sawirka, haddii ay sawir leeyihiin iyo haddii kale, waxay u shaqaysaa labada dhinacba
Fur xiriirkaas, hadda garaac dusha sare si aad u muujiso macluumaadka qofka
Dhagsii saddexda dhibic oo sii ikhtiyaarka "Wax ka beddel"
Dhagsii kamarada wareegsan iyo Waxay ku tusi doontaa laba ikhtiyaar, «Qaado sawir» iyo «Ka Xulo Gallery», dhagsii kan ugu dambeeya oo xulo sawir, marka qeybta la xusho, dhagsii sawirka ka dibna xaqiijinta «V» si aad u doorato sawirkaas waana taas
Xeeladdan fudud waxaad awoodi doontaa inaad sawir u dhigto mid ka mid ah dadka aad la xiriirto, laakiin xusuusnow haddii aad beddesho sawirka boggaaga in aanu waayi doonno isbeddelka. Waxay si buuxda ugu shaqeysaa macmiilka rasmiga ah ee WhatsApp waana mid waxtar u leh astaamahaas aad inta badan la hadasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo beddelo sawirka astaanta xiriirka ee WhatsApp
Xiaomi Mi 10i waxaa lagu shaaciyey Snapdragon 750G, 5G iyo 120 Hz bandhigay
Snapdragon 480 cusub wuxuu keenayaa isku xirnaanta 5G mobilada miisaaniyada